Olee otú iji nke kacha mma cold cold matrages n'efu
Ọ na-adị m ka nke a bụ nnukwu mfu, ọ bụghị naanị maka ndị na-enyocha mbara igwe, mana maka mmetụta anyị chere na onwe anyị n'ụwa a - nke dị ukwuu ma furu efu. Ma, ị ga-eme ihe n'eziokwu, nyekwuo ihe ndị ọzọ na mba ahụ na-eme ihe, ọ dị ka ire siri ike iji mee ka ndị mmadụ nwee mmasị na ọkụ mgbe ị na-eji ọkụ na mbara igwe.
Ejikọkwara m chaja maka ụdị batrị a nwere 5mm nwoke na-enye m ohere iji kwụọ ụgwọ batrị ahụ, nke na-agaghị ekwe omume. VIP agwọ nwere obere bọtịnụ na-enye ohere na imi ya na-enye ohere ka ọ gbanye ma gbanyụọ pensụl ma ọ bụ nke a na-adịghị ahụ anya ọ gwụla ma ị ma ebe ị ga-ele anya.
Nanị akụkụ na-agagharị bụ rotor, nke nwere magnet. Mgbe ihe na-agbanwe ihe, iwu nke ikuku na-akpali akpali a na-ahazi. A na-achịkwa polarity nke ikuku ọ bụla. Ihe ngosi a na-egosi ọnọdụ dị mfe nke onye nchịkwa ga-esochi. Nhọrọ ọzọ dị ugbu a na-agbanwe polarity dị ugbu a, na-enye ikuku ọ bụla na-anyụ anyụ a.